soo saare warshadeed
Way fududahay in la rakibo, maamuli karo oo la buuxiyo shuruudaha tayada biyaha ee kala duwan. Isla mar ahaantaana, sahaminta aasaaska iyo naqshadeynta taangiyada hayadaha ayaa ah dammaanad asaasi ah oo loogu talagalay hawlgal badbaado leh oo taangiga weyn ah. carrada jilicsan, aasaaska buuraha iyo aasaaska ciidda qaaska ah, kiisaska la xaqiijiyay si taxaddar leh, oo horay u sii dhigaya is ...
Taangiga GFS wuxuu leeyahay iska caabin heer sare ah oo jirka wuxuuna u isticmaalaa inuu keydiyo aashitada iyo dareeraha alkali dhirta. Weelka dhaldhalaalka ah waxaa lagu buufiyaa dusha sare ee weelka birta, ka dibna sare u kaca ayaa loo fuliyaa si looga dhigo dusha sare ee saxuunta birta u adkaysata. Dusha sare ee loo yaqaan 'Enamel dusha' waa mid siman, la isku qurxiyo oo lagu shaabadeeyey weel gaar ah, oo ku habboon ujeedooyin badan oo ah kaydinta dareeraha kala duwan. Shuruudaha walxaha keydinta haanta kiimikada Haddii haanta keydinta kiimikada ay ka buuxsan karto olol